RASMI: Manchester United oo qandaraaska u kordhisay mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
RASMI: Manchester United oo qandaraaska u kordhisay mid ka mid ah xiddigaheeda
Dajiye February 16, 2021
(Manchester) 16 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay qandaraaska u kordhisay mid ka mid ah xiddigaheeda.
Sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester United, in Mason Greenwood uu u saxiixay Red Devils heshiis gaaraya ilaa iyo 2025, iyadoo heshiiska uu qeyb ka yahay inuu sanad kale ku darsan karo.
Mason Greenwood ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester United, kaddib heshiiska cusub uu saxiixay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u shaqeeyey si adag si aan heerkaan u gaaro, labadi sano ee la soo dhaafay aad ayey u qurux badnaayeen.”
“Wax badan ayaa jira oo aan doonayo inaan ku guuleysto aniga waana ogahay inay tani tahay jawiga ku haboon ee lagu ciyaaro kubada cagta.
“Garab istaaga tababaraha, shaqaalihiisa tababarka, iyo ciyaartoy badan aad u fiican oo oo wax laga barto, waan ogahay inaan horumar sameynayo maalin kasta, waxaana aad iiga go’an inaan si adag u shaqeeyo isbuuc walba si aan uga caawiyo kooxda inay gaaraan guulo.”
“Waxaan doonayaa inaan u abaal gudo kooxda maadaama ay i caawisay sanadihii lasoo dhaafay, qof walbana aan tuso waxa aan awoodo.”
Greenwood ayaa u ciyaaray kooxda Manchester United 29 kulan tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka haatan socda tartamada oo dhan, wuxuu dhaliyay 4 gool, wuxuuna caawiyay 5 gool kale.
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ee sanadkii 1978 oo Korona Fayras u geeriyooday
David Alaba oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Bayern Munich